Làlana mankany amin'ny repoblika: Barbados dia mifidy ny filohany voalohany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Barbados » Làlana mankany amin'ny repoblika: Barbados dia mifidy ny filohany voalohany
Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Dame Sandra Mason, ny governora jeneraly ankehitriny, dia nifidy ny filohan'i Barbados voalohany.
Ny hetsika dia nahatonga an'i Barbados, firenena an-dàlam-pandrosoana, mpilalao ara-dalàna kokoa amin'ny politika manerantany, nefa mety ho "hetsika mampiray sy nasionalista" izay mety hahasoa ny mpitondra ankehitriny ao an-trano.
Dame Sandra Mason, ny governora jeneraly ankehitriny, dia voafidy ho filohan'i Barbados voalohany.
Ny antso ho an'ny fiandrianam-pirenena feno an'i Barbados sy ny fitarihany tanindrazana dia nisondrotra tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Masoniana amin'ny 30 Novambra, faha-55 taonan'ny fahaleovantenan'i UK.
Amin'ny dingana iray manandanja mankany amin'ny famongorana ny lasa zanatany nosy Karaiba, ny zanatany anglisy taloha Barbados hisolo an'i Elizabeth II, ny Mpanjakavavin'ny Fanjakana Mitambatra ary sehatra iraisan'ny Commonwealth 15 hafa, miaraka amin'ny filoham-pirenena vao voafidy ho filoham-panjakana ary ho lasa repoblika.
Voafidy tamin'ny alarobia lasa teo i Dame Sandra Mason, ny governora jeneraly ankehitriny, tamin'ny alàlan'ny latsa-bato roa ampahatelon'ny fivoriana niarahan'ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona, ​​dingana lehibe iray, hoy ny governemanta tamin'ny fanambarana iray, momba ny “làlana mankany amin'ny repoblika. ”.
Zanatany anglisy taloha izay nahazo fahaleovan-tena tamin'ny fanjakana mitambatra tamin'ny 1966, ny firenena 300,000 XNUMX latsaka monja dia efa nifikitra hatramin'ny ela ny fifandraisana tamin'ny mpanjaka britanika. Saingy ny antso ho an'ny fiandrianam-pirenena feno sy ny fitantanana ny tanindrazana dia nisondrotra tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Mason, 72 taona, dia hianiana amin'ny 30 Novambra, faha-55 taonan'ny fahaleovantenan'ny firenena amin'ny fanjakana mitambatra. Mpahay lalàna teo aloha izay governora jeneralin'ny nosy hatramin'ny taona 2018, izy ihany koa no vehivavy voalohany nanompo tao amin'ny Fitsarana ambony an'i Barbados.
Barbados Ny praiminisitra Mia Mottley dia niantso ny fifidianana filoham-pirenena “fotoana fohy” amin'ny dian'ny firenena.
Nilaza i Mottley fa tsy fanamelohana ny lasa Britanika ny fanapaha-kevitry ny firenena.
Mety hahasoa an'i Barbados ny fifidianana ary na any an-toerana izany na any ivelany.
Mahatonga ilay fiovana Barbados, firenena kely an-dàlam-pandrosoana, mpilalao ara-dalàna kokoa amin'ny politika manerantany, nefa mety ho "hetsika mampiray sy nasionalista" izay mety hahasoa ny mpitondra ankehitriny ao an-trano.
Barbados dia notakin'ny Anglisy tamin'ny 1625. Nantsoina hoe "Little England" izy noho ny tsy fivadihany tamin'ny fomba amam-panao anglisy.
Toerana fizahan-tany malaza ity; talohan'ny areti-mandringana COVID-19 dia mpizahatany iray tapitrisa mahery no nitsidika ny morontsiraka mahafinaritra sy rano madio mangarahara isan-taona.